Kudzikisira: Yakanakisa Maitiro Ekudzivirira Kana Kugadzirisa Dzokorora Dhata reVatengi | Martech Zone
Duplicate dhata haina chete kudzikisira iko kwechokwadi kweyebhizinesi nzwisiso, asi zvinokanganisa hunhu hwako hwevatengi ruzivo zvakare. Kunyangwe mhedzisiro yedhipatimendi yedatha yakatarisana nemunhu wese - IT mamaneja, vashandisi vebhizinesi, vanoongorora data - ine kukanganisa kwakanyanya pane kushambadzira kwekambani Sevashambadziri vanomiririra chigadzirwa chekambani nezvipiriso zvebasa muindasitiri, data rakashata rinogona kukurumidza kusvibisa zita rako rechiratidzo uye rinotungamira mukuendesa zvakashata zvevatengi zviitiko. Duplicate dhata muCRM yekambani inoitika nekuda kwezvikonzero zvakasiyana.
Kubva pakukanganisa kwevanhu kuenda kune vatengi vanopa ruzivo rwakasiyana zvakasiyana panguva dzakasiyana munzvimbo mune dhatabhesi yesangano. Semuenzaniso, mutengi anonyora zita rake saJonathan Smith pane imwe fomu uye Jon Smith pane imwe. Dambudziko racho rinowedzerwa nedhatabhesi iri kukura. Izvo zvinowanzo kuwedzera kuomarara kune manejimendi kuteedzera DB uyezve kuteedzera yakakodzera data. Zvinowedzera kuoma kuona kuti sangano reDB rinoramba rakarurama ”.
Natik Ameen, Nyanzvi Yezvekutengesa ku Canz Kushambadzira
Muchikamu chino, tichatarisa mhando dzakasiyana dzedhata, uye dzimwe nzira dzinobatsira dzinogona kushandiswa nevatengesi kudzikisa dhatabhesi dzekambani.
Mhando dzakasiyana dzeDhivhisi Dhata
Duplicate dhata inowanzo tsanangurwa sekopi yeiyo yekutanga. Asi pane mhando dzakasiyana dzedhata dzinowedzera kuoma kwedambudziko iri.
Chaizvo zvakapetwa mune imwechete sosi - Izvi zvinoitika kana zvinyorwa zvichibva kune imwe dhata zvichitamisirwa mune imwe sosi yedhata pasina kufunga nezvenzira dzinoenderana kana dzekubatanidza. Muenzaniso unenge uri kuteedzera ruzivo kubva kuCRM kuenda kune email email yekushandisa. Kana mutengi wako akanyorera kune yako tsamba, saka rekodhi yavo yatovepo mune yeemail kushambadzira chishandiso, uye kuendesa data kubva kuCRM kune chishandiso kunogadzira zvakapetwa makopi echinhu chimwe chinhu.
Chaizvo zvakapetwa mune akawanda masosi - Dzakadzokororwa zvakapetwa munzvimbo dzakawanda dzinowanzo simuka nekuda kwedanho rekuchengetedza data kukambani. Masangano anowanzo ramba zviitiko zvekuchenesa dhata, uye vanowanzo chengeta makopi ese e data avanayo. Izvi zvinotungamira kune akasiyana masosi ane duplicate ruzivo.
Kusiyanisa zvakapetwa mune akawanda masosi - Zvinyorwa zvinogona kuvapo neruzivo rwakasiyana zvakare. Izvi zvinowanzoitika kana vatengi vachienda neshanduko muzita rekupedzisira, zita rebasa, kambani, email kero, nezvimwewo Uye sezvo paine misiyano inozivikanwa pakati pezvakare nezvitsva zvinyorwa, ruzivo rwunouya runotorwa sechinhu chitsva.
Asina-chaiwo makopi mune akafanana kana akawanda masosi - Iyo isiri-chaiyo duplicate iri apo kukosha kwedata kunoreva chinhu chimwe chete, asi inomiririrwa munzira dzakasiyana. Semuenzaniso, zita rekuti Dona Jane Ruth rinogona kuponeswa saDona J. Ruth kana DJ Ruth. Maitiro ese e data anomiririra chinhu chimwe chete asi kana achienzaniswa nemaitiro akareruka ekufananidza dhata, anoonekwa seasina machisi.
Kudzikisira kunogona kuve kwakaomesesa maitiro sevatengi nemabhizinesi kazhinji vanogadzirisa yavo yekudyidzana data nekufamba kwenguva. Pane musiyano pamabatiro avanopinda yega yega ndima yedata - kubva kuzita ravo, email kero (es), kero yekugara, kero yebhizinesi, nezvimwe.
Heino runyorwa rwe5 data deduplication yakanakisa maitiro ayo vatengesi vanogona kutanga kushandisa nhasi.
Sarudzo 1: Iva Nesimba Kuongorora Pane Kupinda Dhata
Iwe unofanirwa kuve nemabatirwo akasimba ekusimbisa pane ese mawebhusaiti ekupinda data. Izvi zvinosanganisira kuve nechokwadi chekuti iyo yekuisa data inoenderana neinodiwa dhata mhando, fomati, uye manyepo pakati pezvinogamuchirwa maseru Izvi zvinogona kuenda nenzira yakareba mukuita kuti data rako rive rakazara, rinoshanda, uye rakarurama. Uyezve, zvakakosha kuti yako yekupinda dhata kufambiswa kwebasa haina kungogadzirirwa kugadzira zvinyorwa zvitsva asi kutanga kutsvaga uye uwane kana iyo dhatabhesi iine rekodhi riripo rinoenderana neiri kuuya. Uye muzviitiko zvakadaro, zvinongowana uye kugadzirisa, pane kugadzira rekodhi nyowani. Makambani mazhinji akaisa macheki ekuti mutengi agadzirise dhata ravo zvakare.
Sarudzo 2: Ita Kudzikisira Uchishandisa Zvishandiso Zvekushandisa
Shandisa kuzvishandira data kudzikisira software izvo zvinogona kukubatsira iwe nekutsva nekuchenesa zvinyorwa zvakapetwa. Maturusi aya anogona simbisa data, chaizvo vanowana chaiwo uye asina-chaiwo machisi, uye ivo zvakare vakatema pabasa remaoko rekutarisa kuburikidza nezviuru zvemitsara yedata. Ita shuwa kuti chishandiso chinopa rutsigiro rwekunze dhata kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana senge dzakapfuura machira, CRM dhatabhesi, zvinyorwa, nezvimwe.
Sarudzo 3: Shandisa Dhairekisheni-Yakanangana neDeduplication Matekiniki
Zvichienderana nemhando yedata, kudzikisira data kunoitwa zvakasiyana. Vatengesi vanofanirwa kungwarira pavanenge vachirasa data nekuti chinhu chimwe chete chinogona kureva chimwe chinhu chakasiyana pane akasiyana data hunhu. Semuenzaniso, kana maviri data marekodhi akaenzana pakero yeemail, saka pane mukana wakakura wekuti ivo vakaita zvakapetwa. Asi kana maviri marekodhi akaenzana pakero, saka hazvireve kuti ndeyekunyepedzera, nekuti vanhu vaviri vemba imwe chete vanogona kuve nekunyoreswa kwakasiyana kukambani yako. Saka ive shuwa yekumisikidza deduplication dhata, kubatanidza, uye kuchenesa zviitiko zvinoenderana nerudzi rwe data dhata rako rine.
Sarudzo 4: Kuwana Iyo Goridhe Master Rekodhi Kuburikidza neData Rekunatsiridza
Paunenge iwe wango tarisa rondedzero yemitambo iriko mune yako dhatabhesi, zvakakosha kuti uongorore ruzivo urwu data risati rasanganisa kana kuchenesa sarudzo. Kana akawanda marekodhi aripo echinhu chimwechete uye mamwe achimiririra ruzivo rusiri, saka zvakanaka kuchenesa marekodhi iwayo. Kune rimwe divi, kana zvakapetwa zvisina kukwana, ipapo kubatanidza dhata isarudzo iri nani sezvo ichigonesa kuwedzerwa kwedata, uye zvinyorwa zvakasanganiswa zvinogona kuwedzera kukosha kune rako bhizinesi.
Chero nzira, vashambadziri vanofanirwa kushanda kuti vawane kuona kumwe chete kweruzivo rwavo rwekushambadzira, inonzi iyo goridhe tenzi rekodhi.
Sarudzo 5: Wongorora Dhata Yemhando Zviratidzo
Kuenderera mberi kwekuedza kuchengetedza yako data kwakachena uye kunyorerwa ndiyo yakanyanya kunaka nzira yekuita yako deduplication zano. Chishandiso chinopa data kudhinda uye mhando manejimendi maficha anogona kuve ekushandisa kukuru pano. Izvo zvakakosha kune vatengesi kuti vatarise kuti rakarurama sei, rinoshanda, rakakwana, rakasarudzika, uye rinoenderana data iri iro riri kushandiswa mukushambadzira mashandiro.
Sezvo masangano ari kuramba achiwedzera manyorerwo emashandisirwo emabhizinesi avo, zvave kudikanwa kune wese mushambadzi kuve nemazano ekudzikisira dhata munzvimbo. Initiative senge kushandisa dhata rekudzikisira maturusi, uye kugadzira zvirinani kugadziriswa kwekufambiswa kwemabasa ekugadzira nekugadzirisa zvinyorwa zvemadhodhi ndiwo mamwe maitiro akakosha anogona kugonesa kuvimbika kwemhando yedhata musangano rako.
Nezve Dhata Manera
Data Ladder ndeyemhando yedhata manejimendi manejimendi iyo inobatsira makambani mukuchenesa, kuisa mumapoka, kuenzanisa, kudzikisira, kunyora, uye kuvandudza data ravo. Yedu indasitiri-inotungamira data inoenderana software inokubatsira iwe kuwana inowirirana marekodhi, kusanganisa data, uye kubvisa zvakapetwa uchishandisa zvine hungwaru fuzzy enzanirana uye muchina kudzidza algorithms, zvisinei nekwako data rako rinogara uye mune iyo fomati.
Dhawunirodha YeMahara Muedzo weDhata Manera eData Kufananidza Software
Tags: kugadzirisa keroaichakagadzirwa njereanogona kushambadziradata yemutengidata chikamukuchenesa datakuvandudza datamanera e datadata inoenderanakudhinda datakumisikidzwa kwedatakuendesakudzikisiradzokorora data yevatengifuzzy enzaniranamachine learningnatik ameen